Madaxweynaha Somalia Oo Ka Qayb-galay Aaska Gen. Cali Samatar | Somalilandpost
Madaxweynaha Somalia Oo Ka Qayb-galay Aaska Gen. Cali Samatar
Muqdisho (SL.Post) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda maamul-goboleedyada qaar ka mid ah, ayaa maanta ka qayb-galay Aas qaran oo xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga ee Muqdisho loogu sameeyay marxuum Jeneraal Maxamed Cali Samantar oo Madaxweyne Ku-Xigeen ka soo noqdey xukuumaddii militariga ee Somalia.
“Innaa Lillaahi waa Inaa Ileyhi Raajicuun. Marxuum Maxamed Cali Samantar waxaa uu ahaa hoggaamiye muddo dheer waddankan u adeegayey, innagoo ixtiraamkaas iyo Wax-qabadkaas eegeyna ayaan ku maamuusney inaan aaskan heerka qaran ee uu mudan yahay u sameyno. Ciidankeena waxaa uu mar noqdey mid ka mid ah kuwa ugu fiican Afrika, waxaana marag ma doonnto ah in General Samantar uu kaalin weyn ku lahaa dhismaha ciidanka tayadaasi iyo karaamadaas leh ee waddankeena magaca u soo hoyay.” ayuu yidhi Madaxweynaha Somaaliya Xasan Sheekh.
Dhinaca kale Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mid mid ugu gacan-qaaday xubnaha qoyska Marxuum Cali Samatar, isagoo marxuumka Ilaahay uga baryey inuu naxariistii janno ka waraabiyo, iyagan uu samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo.
Marxuum Maxamed Cali Samantar ayaa xilligii dowladda militariga ee Soomaaliya ka soo noqday Madaxweyne Ku-Xigeen, Ra’iisul Wasaare , Wasiirka Gaashaandhigga iyo Taliyaha Ciidammada Xoogga, waxaana uu 19-kii bishan August 2016 ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.